ရီးရဲမက်ဒရစ်နဲ့ စာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့ အဆင်မ‌ပြေဖြစ်နေတဲ့ နောက်ခံလူကြမ်းကြီး ကပ်ပတိန်ရာမို့စ်ကို မြင့်မားတဲ့ လစာ‌နဲ့ ကမ်းလှမ်းသွားမယ့် ယူနိုက်တက် – Sport Gaber
ယူနိုက်တက် အသင်း သည် ရီးရဲမက်ဒရစ် မှ စပိန်ကြယ်ပွင့် နောက်တန်း ကစားသမား ရာမို့ ကို မြင့်မားတဲ့ လစာပေးချေကာ ခေါ်ယူဘို့. ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ သိရဘာတယ် ။
ရာမို့ သည် ရီးရဲမက်ဒရစ် အသင်း ကနေ. လာမယ့် နွေရာသီ အပြောင်းအရွေ့ ဈေးကွက်မှာ အသင်းကနေ အလွတ်နဲ့ ထွက်ခွာခွင့် ရရှိထားတာ တွေ့ရဘာတယ် ။
လက်ရှိမှာတော့ အင်္ဂလန်ကြယ်ပွင့် နောက်တန်း ကစားသမား မက်ဂွာရား ဒဏ်ရာ ရနေတာကြောင့် ယူနိုက်တက် အသင်းသည် အားနည်းနေတဲ့ နောက်တန်း ကို အင်အားဖြည့်တင်းဘို့. ရာမို့ကို စိတ်ဝင်စားနေတာ တွေ့ရဘာတယ် ။ ဆိုးရှား သည် ရာမို့ရဲ့ ဦးဆောင်နိုင်မှု အရည်အချင်းတွေကို သဘောကျနေတာ တွေ့ရဘာတယ် ။
ရာမို့ သည် 1 နစ် ထပ်မံ သက်တမ်းတိုးခွင့် ပါဝင်တဲ့2နှစ်စာချုပ်နဲ့ ကမ်းလှမ်းလာမယ်ဆိုရင်တော့ ယူနိုက်တက် ရဲ့ ကမ်းလှမ်းချက်ကို လက်ခံဖွယ် ရှိနေတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ ရာမို့ရဲ့ အနာဂတ်အပေါ် အဖြေရှာဖို့အတွက် သောကြာနေ့မှာ ရာမို့ရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ဥက္ကဌ ပီရက်ဇ်တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ ရှိနေပါတယ်။
ရာမို့ သည် စပိန်မှာ ဆက်နေဘို့.2နှစ်စာချုပ်နဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုကို လိုချင်နေပေမဲ့ ရီးရဲမက်ဒရစ် ကတော့ အသက်အရွယ် ကြီးနေတဲ့ ရာမို့ ကို 1 နှစ်သာ သက်တမ်းဖွယ် ရှိနေတာ တွေ့ရဘာတယ် ။ ရာမို့ သည် ရီးရဲမက်ဒရစ်မှာ 16 ရာသီကြာ ကစားခဲ့ပြီး လာလီဂါဖလား5လုံး၊ ချန်ပီယံလိဂ်4လုံး၊ ကလပ်ကမ္ဘာ့ဖလား4လုံး ရထားခဲ့ပါတယ်။
Previous Article စီရော်နယ်ဒို နဲ့ ဘရူနိုတို့ရယ့် သွင်းဂိုးတွေနဲ့ ဂိုးပြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ ပေါ်တူဂီအသင်း
Next Article ပြည်သူချစ် သရုပ်ဆောင် အိန္ဒြာကျော်ဇင် ပြန်လည်လွှတ်မြောက်ကြောင်း သတင်းများထွက်ပေါ်